Miinooyinka milixdu ku taal - Kateedralka milixdu ku jirto ee dhulka hoostiisa ku yaal ee Poland | Safarka Absolut
ka Miinooyinka milixda waxay ku yaalliin Poland iyo in ka sii badan, magaalada Wieliczka oo ka tirsan aagga Krakow. Laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad, waa la booqan karaa markii ugu horeysay halkan laga bilaabo, waxay noqotay mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn dalka Poland. In ka badan nus milyan booqdeyaal ah ayaa isdiiwaangaliya sanadkii.
Miinooyinka milixda ayaa sidoo kale loo yaqaan "Kaniisada dhulka hoostiisa ku taal ee cusbada". Waxay leeyihiin qoto dheer in ka badan 327 mitir iyo dherer ahaan qiyaastii 300 kilomitir. Maanta waxay ka mid yihiin meelaha dalxiis ee heer sare, iyagoo bixiya waddooyin kala duwan iyo siro badan oo qarsoodi ah, kuwaas oo aan hadda ka ogaan doonno goobtan Dhaxalka Adduunka.
1 Sidee loo tagaa miinooyinka milixda
2 Socdaallo kala duwan oo miinooyinka milixdu ku jirto
2.1 Socdaalka dalxiiska
2.2 Safarka Macdanta
2.3 Safarka xajka
2.4 Munaaraddii qalinjabinta
2.5 Sirta macdanta cusbada
3 Qiimaha iyo jadwalka
4 Meesha la joogo
5 Xog la tixgelinayo
Sidee loo tagaa miinooyinka milixda
Laga soo bilaabo bartamaha Krakow, waxaan ka heli doonnaa miinooyinka milixda meel u jirta 10 kiilomitir. Si tan loo sameeyo, waxaad qaadi kartaa dhowr waddo sida tareenka, baska ama dooro dalxiis in qiyaastii 35 euro, ay ku jiri doonto hagaha, albaabka laga soo galo miinooyinka iyo waliba gaadiidka.
Tareen ahaan: Haddii aad dooratay inaad safarka kaligaa sameyso, wax la mid ah ma jiraan tareenka safarka. Xaaladdan oo kale, waxaad ka qaadi doontaa saldhigga Krakow ilaa Wieliczka Rynek Kopalnia station.
Bas: Waa mid kale oo ah gaadiid raqiis ah, laakiin haa, waxay yeelan doontaa joogsiyo badan. Sababtaas awgeed, safarkaaga waxaa laga yaabaa inuu dib u dhaco wax ka badan intii loo baahnaa. Waxaad khadka 304 ka qaadi doontaa xarunta dukaameysiga ee Galería Krakowska imaatinkuna wuxuu noqon doonaa Wieliczka Kosciól.
Socdaallo kala duwan oo miinooyinka milixdu ku jirto
Mar alla markii aad joogtid goobta, waa inaad ogaataa inay jiraan waddooyin kala duwan. Markaa sidan dartiis looma seegi doono gees uun ka mid ah miinooyinka. Waxay sidoo kale la qabsan doonaan baahiyahaaga.
Mid ka mid ah booqashooyinka ugu badan ee la codsaday waa tan. Waxay ku saabsan tahay booqashada qaar 20 qol oo cusbo laga soo saaray. Isla mar ahaantaana waxaad arki kartaa sida harooyinka sidoo kale qayb uga yihiin. Ugu dambeyntiina, waxaad ku raaxeysan doontaa farshaxannada milixda. Ku saabsan yahay shaqsiyaadka taariikhiga ah ee lagu tufay dhagaxa cusbada. Qiyaastii seddex kilomitir waa waxa aad ku raaxeysaneyso tanna, waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad hoos u dhigto tallaabooyin taxane ah, kuwaas oo si fiican ugu qalma. Socdaalkan wuxuu ka bilaabmayaa Danilowicza si wanaagsan waxaadna booqan doontaa mid ka mid ah qolalka ugu caansan oo ah tan Santa Kinga. Qalabka iyo mashiinada lagu isticmaalay meeshan sidoo kale ma waayi doonaan.
Kuwa doonaya inay la kulmaan wax walba oo la xiriira miinada qofka ugu horreeya, tani waxay noqon doontaa booqashadooda ugu wanaagsan. Waxay ku labisan doonaan dharka lagama maarmaanka u ah safarka. Marka hore waxaad u dhaadhacaysaa mid ka mid ah ceelasha duugga ah kaas oo magacyo ku leh, ah Regis si fiican. Xaaladdan oo kale, waxay noqon doontaa hagaha socdaalka ee hawl u xilsaari doona ka qaybgalayaasha. Waxay noqon kartaa sahaminta qol ama cusbo u raridda, iyo kuwo kale oo badan. Shaki la'aan, waa riwaayad ugu madadaalo badan. Waxay sidoo kale leedahay muddo la mid ah tii hore, saddex saacadood.
Xaaladdan oo kale, waxaan gaarnay dariiqa xajka. Dhexdeeda waxaad ku awoodi doontaa inaad ku ogaato kaniisadaha iyo farshaxannada lagu xardhay cusbada. Waxay ku dhammaan doontaa cibaadada Santa Kinga si ay ugu raaxeysato dhammaan naqshadaha ku yaal meeshan. Waa kula yaabi doontaa !. Waxaad sidoo kale ku raaxeysan kartaa kaniisada San Juan, in kasta oo xaaladdan ay ku daboolan tahay alwaax. Waa lagama maarmaan in la muujiyo cusub kaniisad u gaar ah John Paul II. Xaaladdan oo kale, waddadu waxay noqon doontaa laba saacadood iyo badh.
Bar kale oo kulan ayaa ah munaaradda Qalinjabinta. Xaaladdan oo kale, kama hadlayno adduunyada hoose, laakiin waxaan la imaan doonnaa dusha sare. Waa goob si xor ah loogu socdo waxaadna ogaan kartaa waxtarkeeda caafimaad ee weyn. Aaggan waad neefsan kartaa wicitaanka buufin brine, taas oo ku habboon daaweynta cudurrada neefsashada. In sidan, waxaad u nadiifin doontaa marin-haweedka habka ugu dabiiciga ah. Dabcan, laguma talin karo inaad in ka badan nus saac ku jirto meeshan. Taawarku waa in ka badan 26 mitir oo dherer ah, markaa marka lagu daro daweynta jidhka, waxay u noqon kartaa indhaha, iyada oo ay ugu wacan tahay aragtida dusha sare ee ay naga tagayso.
Sirta macdanta cusbada
Wixii geesinimada leh uguna dhiirran, waxaa jira marinka sirta macdanta milixda. Waa mid ka mid ah qaybaha ugu murugsan, maaddaama ay tahay marin ka dhib badan oo waa inaad yeelataa awood jireed oo weyn. Waxaad awoodi doontaa inaad dhex marto jeexitaanka meelaha cidhiidhi ah, laakiin marwalba adoo kormeeraya khabiir. Waxaad sidoo kale ogaan doontaa qoto dheerida adduunka.
Booqashada shaqsiga ah, waxaad bixin doontaa 84 PLN. Qiimaha lagu dhimay kaarka ardayga, carruurta afar sano jir ama ka weyn, wuxuu noqon doonaa 64 PLN. Waxaad sidoo kale ku raaxeysan kartaa qiimaha qoyska oo ay ku jiraan 4 qof oo loogu talagalay 232 PLN. Waa in la yiraahdaa, qiyaastii 84 PLN waxay ku saabsan tahay 20 euro. Siciradu wax yar bay kordhiyaan haddii aan ka hadalno bisha Abriil-Maajo iyo Luulyo ama Ogosto.
Sida for jadwalka macdanta milixda Wuxuu furan yahay Abriil 1 ilaa Oktoobar 31 laga bilaabo 7:30 a.m. ilaa 19:30 pm Inta u dhexeysa Nofeembar 2 ilaa 21-ka Maarso, waxaad ku raaxeysan kartaa deegaankan 8:00 subaxnimo ilaa 17:00 galabnimo.
Meesha la joogo
Waxaad leedahay laba qaybood oo aasaasi ah si aad u hesho hoy: Dusha sare ama moolka hoose ee miinada. Kaliya waxay kuxirantahay waxa adiga iyo qoyskaaga sida ugu fiican ugu shaqeynaya.
Dejinta dusha sare: Halkan waxaad ka heli kartaa hudheelka raaxada ah ee loo yaqaan Grand Sal, oo leh afar xiddigood. Dhinaca kale, waxaa jira a hawlgabka ayaa loo yaqaan, «Mlyn Solny». Waa deegaan aad loo yaqaan laakiin sidoo kale aad u qurux badan.
Hoyga moolka dheer: Dhinac, waxaa jira Kaamirada slowacki Waxay leedahay 48 sariirood iyo aag ay ku ciyaaraan kuwa yaryar. Laakiin dhinaca kale, waxaad ka heli doontaa waxa loogu yeero, qolka deggan. Sida magaceedu tilmaamayo, waxay ahaayeen xero xasiloon oo hadda loo beddelay meel lagu nasto, halkaas oo ay jiraan ilaa 28 meelood.
Xog la tixgelinayo
Had iyo jeer way fiicantahay gasho meel sidan oo kale ah dhar diirran. In kasta oo xaqiiqda ah inaad booqato xagaaga, gudaha macdanta milixdu heerkulku waa qiyaastii 14º.
Hadaad rabto inaad nooleeyso daqiiqada sawiro fiican, waa inaad bixisaa 10 PLN dheeraad ah oo ku saabsan qiimaha tigidhkaaga. Waxaad ku bixin kartaa labadaba xafiiska sanduuqa iyo markii safarkaagu bilaabmay.
Lama soo geli kartid xayawaan maadaama aysan jirin meel ay dagi karaan.
Macdanta milixdu waa ku habboon tahay booqashooyinka qoyska. Kaliya waa inaad doorataa habka saxda ah ee loogu talagalay. Carruurta ka yar 4 sano waa lacag la’aan. Intaas waxaa sii dheer, wadada, waxaad ka heli doontaa miisaska beddelaadda ama kuraasta si aad ugu raaxaysato.
Safarka dalxiiska waxaa sidoo kale ku yaal aag waxaa booqan kara dadka dhaqdhaqaaqoodu yaraaday. Tan awgeed, waxay leeyihiin forklifts.
Adiguba waad leedahay musqulaha ku dhex jira miinada. Waxaad midkood ka heli doontaa mar haddii in ka badan nus saac ay dhaaftay iyo tan xigta, ka dib qiyaastii 90 daqiiqo bilowga wadada.
Ugu dambeyntiina, waa in la xusuusnaado in meeshan ay ka badan tahay 2.400 qol oo ay ku xiran yihiin qolallo kala duwan, oo dhererkoodu yahay 245 km. Intaas waxaa sii dheer, way qaadaan heerar kala duwan oo u dhexeeya 64 mitir oo qoto dheer illaa 327 mitir. Sidaa darteed, had iyo jeer waxaa lagugula talinayaa inaad raacdo oo aad ixtiraamto sharciyada iyo waliba hagaha si aan dhibaato u jirin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Wieliczka Cusbada Aniga